Momba anay - Nanchang Vision Garment Co., Ltd.
Tongasoa eto amin'ny Vision
Nanchang Vision Garment Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanàna Nanchang, faritanin'i Jiangxi, Sina. Nanchang dia malaza amin'ny haingon-damba maoderina ao an-trano sy any ivelany, nomena mari-pankasitrahana 'City malaza malaza Knitwear City', 'National Textile Apparel Creative Design Pilot Park', 'Provincial Pilot Unit for Optimizing and Upgrade the Traditional Industries' ary maro ny anaram-boninahitra .
Manana ny orinasa mpiara-miasa sy mpanonta pirinty izahay, miaraka amin'ny traikefa efa ho 10 taona hanampiana ny mpanjifanay amin'ny filan'izy ireo marika amin'ny fanao manokana, manolotra peta-kofehy manokana, fanaovana sary an-tsaina ny fanaingoana ny sary, fanaovana pirinty hafanana, fanonerana sy fanontana lamba vita amin'ny landy.
Manam-pahaizana manokana izahay amin'ny akanjo baoty toy ny T shirt, polo shirt, hoody, tank top, pant ect., Ary koa manome kojakoja fitafiana toy ny satroka, kitapo ary medaly, ba kiraro ho an'ny fanomezana, fampiroboroboana ary hetsika ivelan'ny trano. Kolontsaina ny kalitao, ary laharam-pahamehana koa izahay. Izahay dia miziriziry hatrany amin'ny fitsipiky ny "Customer First, Quality Foremost". Ny orinasanay dia manana ekipa QC matihanina hiantohana ny vokatra misy kalitao tsara indrindra alohan'ny fandefasana sy ny tsipika famokarana dia afaka manao kalitao tsara amin'ny fotoana fohy. Izahay koa dia manana ekipa manam-pahaizana momba ny famolavolana, afaka manampy anao hanao sarinà sary iray mifanaraka amin'ny eritreritrao. Mila manome maimaimpoana ny atidohanao fotsiny ianao, eto izahay mba hahatanteraka izany.
Te-hitafy akanjo manokana amin'ny hevitrao ve ianao? Te-hamorona akanjo marika anao manokana ve ianao? Te hanana tokana sy vaovao ianao? Raha izany dia azonao atao ny manindry ny toerana ambany mety hahazoana azy! Tongasoa eto amin'ny tranonkalantsika.